သတိထားပြီး ရိုက်ကြစို့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » သတိထားပြီး ရိုက်ကြစို့။
Posted by Mလုလင် on Mar 31, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 36 comments
အခု ပိုစ့်ကတော့ မြှောက်ပေးတဲ့သူ ရှိလို့ ထက တဲ့ ပိုစ့်ပါ လို့ အရင် ပြောပါရစေ။ နောက်ပိုင်းခောတ်မှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်တယ်ဆိုတာ အလွန်လွယ်ကူနေပါပြီ။ အိမ်သုံးနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပျော်တမ်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖြစ် ကြမှာပါ။ဓာတ်ပုံ ပညာ အကြောင်း၊ ကင်မရာ အကြောင်း၊ ပူပူနွေးနွေး ပဲ posing အကြောင်း ကို မြင်ဆရာ၊ သင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ တွေ ရေးပြီးခဲ့ ပါပြီ။ ကျွန်တော့် ခုပိုစ့် က သတိထား ရမယ့် အချက် လေးတွေ ပါ။
မူရင်း web page မှာတော့ ၇၈ ချက်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒီ လေးချက် ကတော့ လက်ရှိ အဖြစ်များ တာလေးတွေ မို့ပါ။ ကိုယ်တိုင် လဲခံ ခဲ့ရပြီး ပြီမို့ … ရွာသူ၊ရွာသား တွေလဲ ကိုယ့်လို မခံ ကြရလေအောင် …. သတိထားပြီး ရိုက်ကြပါစို့။
၁။ ကိုယ်ရိုက်တဲ့ လူ ရဲ့ မုဖ် ကို အတိအကျ နီးပါး ဖမ်းပါ။ မျက်စိ ပိတ်သွားသလား .... ?
၂။ ကိုယ်ရိုက်မယ့် လူရဲ့ ခေါင်း ပေါ်မှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင် .. သတိ!!!
စကပ် တို နဲ့ ရိုက်မယ်ဆို .. ခေါင်းတင်မဟုတ် အောက်ကိုပါ သတိ ...
၃။ ကိုယ်ရိုက်မယ့် လူ အထက်ပိုင်း ကို ရေပြင်ညီ မျှဉ်း မဖြတ်ရ ... သတိ !!!
၄။ ကိုယ့် အရိပ် က ကိုယ်ရိုက်မယ့် အရာဝတ္တု သို့ လူ မှာ ပေါ်မနေရ .. သတိ !!!
တစ်ခါ များ လောလော လောလော နဲ့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာ .. ကရ၀ိတ် ဟော်တယ်မှာပေါ့။ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည် က လောကနတ် အရုပ် နဲ့ရိုက်ချင်လို့ပါတဲ့။ ဖိုးရိုက်ချင် က ရိုက်ပေးလိုက်တာ ပြန်ကြည့်တော့မှ လားလား .. လောကနတ် ရဲ့ လက်က သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ ဂျို လေးကိုထောင်လို့ … အဲလို အရှက်ကွဲခဲ့ပါကြောင်း ရယ် .. မူရင်း လင့် တော့ပြန်ရှာတာ မတွေ့တော့ဘူး။ ဒေါင်းထားတာလဲ စုပြုံနေပြီး ကြာလဲကြာနေပြီဆိုတော့ :-)
၅။ Frame ... ဘောင်လေး ထည့်ရိုက်ပါ။
၆။ Line .. ရေပြင်ညီဖြစ်ဖြစ်. ဒေါင်လိုက်ဖြစ်ဖြစ် ပါအောင် ရိုက်ပါ။
၇။ Rule Of Third ကို သတိရပါ။
၈။ color စုံနိုင်လေ ပိုကြံ့ခိုင် လေ။
၉။ Patterns လေးတွေ ထည့်ရိုက်ပါ။
၁၀။ Geometric Shapes, တနည်း သုံးပွင့်ဆိုင်။
၁၁။ ပြသလို သော အရာဝတ္တုအား အပေါ်လွင်ဆုံးဖြစ်အောင် ထီးတည်း ထားခြင်း။
၁၂။ ရွှေအချိုး ..
နံပါတ် ၅ က နေ 12 ထိက တော့ Basic Rule လေးတွေပါ။ ထပ်ပြောရရင် ပြောလို့လဲ မကုန်နိုင်ပါဘူး.. ပြောရလောက်အောင် လဲ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့လို အခြေခံ လက်သင်တွေအနေ နဲ့ကတော့ ဒီလို rule လေးတွေကို မှီငြမ်းပြီးရိုက်ရပါတယ်။
ရွာထဲမလဲ မြှောက်ပေးတဲ့သူ ရှိတာကတကြောင်း .ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာနေတာကတစ်ကြောင်း… ကြောင့် လျှာရှည် မိပါတယ်။. .. ရွာထဲက ဆြာတွေရေ .. လိုတာလေးတွေ ၀ိုင်းဖြည့် ကြပါဦးလို့ ….။
ယခု ပိုစ့်ဖြင့် .. ဦးစိန်သော့၊ ဒယ်ဒီကြီး နဲ့ တခြား သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ များအား ဂါရ၀ ပြုပါသည်။
အဟီး ..ကျွန်တော့ ပုံလေးတွေ လဲ အားပေးကြပါဥိးနော့ ….
ရွှေမင်းသား နဲ့ ရိုက်ခဲ့ကြတာ။ ဥိးပိန် တံတားအဆင်း နားမှာ။
ဦးပေါက်၊ ဦးစိန်သော့၊ ရွှေမင်းသား၊ Mလုလင်.. ဦးပိန် တံတား ပေါ်ကရိုက်သည်။
အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံး ...
အဆုံးမဲ့ ခရီး ကို သံသရာ ဟုခေါ်သည်။
တကယ်ပြီးပါပြီ … 8-) . 8-)
မင်းကို ကြည့်ရတာ portrait specialist ထင်ရဲ့။
လောကဓာတ် (ပုံ) ပညာ များကို နားမလည်သော်လည်း မပါမဖြစ် တို့ချစ်ချစ် ရော၊ အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံး ရော အရမ်းကောင်းတယ် ထင်မိတယ်။
အောက်ဆုံးက သံသရာခရီးသည် ကတော့ မင်းကိုယ်တိုင်ဘဲ မဟုတ်လော။ :-)
specialist မဟုတ်ရပါဘူး အရီးရယ်။ လက်သင်ပါ။ အောက်ဆုံးကတော့ အဟီး … အဲ့ပုံ ရိုက်တုန်းက ဘေးမှာ ဦးပေါက် လဲပါတယ် အရီး ရဲ့။ ဦးပေါက် အဲ့မှာ ရိုက်တာ နေအခ ဆိုတဲ့ series ဖြစ်သွားတာ ပေါ့။
အဲဒီထဲက.. ကိုတံငါပိုက်ပစ်နေတဲ့ ပုံ(Mလုလင်ရိုက်တာဆိုရင်) .. ၁၀နဲ့ရောင်းပါလားဟင်ငင်..
High Res: Ori ကိုအီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးနိုင်မလား..
ပို့ ပြီးကြောင်း …. 8-)
မုဒ်ကို ဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ ဆရာပီသပါပေတယ်။
(ရိုးရှင်းပြီး သတိထားစရာလေးတွေမို့ တခါတည်း အလွတ်ကျက်သွားပါကြောင်း………)
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ ရီပြရတဲ့သူသာ ပါးညောင်းသွားတယ် မရိုက်ရသေးဘူး။
အဲဒါကြောင့် စနက်ရှော့တွေ၊ လက်ဆော့တွေကို အားကျမိပါတယ်။
Geometric Shapes, တနည်း သုံးပွင့်ဆိုင် နဲ့
ဥလေးဥလေး သားမမြှောက်ပေးဘူးနော် …….
သူကြီးက ဒီဇိုင်းမှာဆွဲသုံးမယ်တဲ့နော် ဆြာလု ….. ပါရမီကတော့လက်ဖျားခါလောက်ရဲ့
အဆင်ပြေမှ ရွာထဲက ဆြာတွေနား တစ်နှစ်လောက်ပညာလာဆည်းပူဦးမှပါ…..
လောလောဆယ်တော့သိတယ်မလား ရေထဲပစ်ချတဲ့အမှုကြီးကြောင့် တစ်နှစ်လောက်မာလကီးယားသွားတယ်
အားပေးလျက် ခင်မင်လျက် လေးစားလျက်……. ရှမ်းပြည်သား(တောင်ပိုင်း)
အမငီး လက်သင်ဆိုပဲ …
မှတ်သား သွားပါတယ် တဲ့ … ။ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ မိသားစု ဘ၀ ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေဗျာ။ ပျောက်နေတာ ကြာပြီနော့ ပြန်တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာ မိပါတယ် အစ်ကို ရေ ..
အောက်ဆုံးက ပုံက ဒူရိုက်ပေးတာလည်း ကျောကြဦး….
အဲ့ပုံက ဦးပေါက် နဲ့ ကျေချင်းကပ် ရိုက်ခဲ့ကြတာ။ Tripod ပေါ်တင်ပြီး ကိုယ့် တိုင်ရိုက် ဖြစ်ပါကြောင်း …။
ကွန်ပစ်တဲ့ပုံကလေးက အပါချာ/စပိ ဘယ်အချိုးနဲ့ရိုက်တာဆိုတာလေး
1/800 , f5.6, ISO 200 ရာသီဥတု နဲ့ ရေအရောင် ကြောင့် black & white လုပ်ထား ဖြစ်တာ ဦးဦးပါလေရာ ရေ။
ကြည့်တာနဲ့ တတ်သွားမယ်ပညာမဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ်
နီသဂျီးဆီက ၁၀ရရင် နာ့လဲရေခဲချောင်းဝယ်ကျွေးပါလား
ကျွန်တော် သိသလောက်ပြော ရရင် ရွှေအချိုးမှာကို ပဲ မူကွဲတွေ ထပ်ရှိသေးတယ်ဗျ။
ရွှေအချိုး က . ပုံတစ်ပုံကို 60:40 ခွဲ တာပါတဲ့။
ဆိုပါတော့ ပုံကို အလျားလိုက်ခွဲမယ်။
အလယ် မျဉ်းရဲ့ မျဉ်းပိုင်း လေးတွေ လွတ် နေတဲ့ point နှစ်ခု မှာ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ အရာဝတ္တုကိုထားမယ်။ အဲလိုလေးဆို ပုံက ပိုအားကောင်းလာမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယ ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း အပေါ်အောက် ပိုင်းထားတာကို အပေါ် ၄၀% အောက် ၆၀ % လို့ မြင်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။
အဲလို နဲ့ အသေးဆုံး ထိ ထပ်ခါထပ်ခါ ပိုင်း လို့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပြချင်တဲ့ Subject က အဲ့ အပိုင်းတွေ ရဲ့ ဆုံမှတ် တွေပေါ် မှာ ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Golden diagonal လဲရှိသေး သဗျ။
သိသလောက် တတ်သလောက် ရှည်ခြင်းသာ …
မန်းလေး ရောက်လာရင် ဒီးဒုတ် လိုက်ပို့ ရမှာနော် ……
ကိုအမ်ကြီးရေ ၊ ညီလေး အတွက် အထူးပညာရတဲ့ ပို့ စ်ပါ ဗျား ။
စကားမစပ် သဂျီး ကို ဝယ်ချင်ရင် သုညတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ် နှစ်လုံးဖြစ်ဖြစ် ထပ်တိုးဖို့ ပြောစေချင်ကြောင်း ပါ ဗျား ။ ဟီဟိ
ညီလေးရဲ့ မျှဝေပေးမှုတွေကို လေးလေးစားစား
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့  … Filter အကြောင်းလေး ရေးပါဦး လား ..ဗျ .
Mလုလင်ရေ၊ ပညာလေးတွေကို အများသိအောင် ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ အတွက် အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ အားပေးသွားပါတယ်။ ဆက်ပါအုံး အချိန်ရရင်။ ဓါတ်ပုံပညာ စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် တွဲလေ့လာနိုင်ကြဖို့ အပေါ်က ဆြာဂီဂီရဲ့ http://myanmargazette.net/73255/travel/photography-pictures-galleries-wallpapers-photo-tips ချိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သန်းနဲ့ ခရုပါ အမ်လုလင်ရေ …
နောင်အခါ စကတ်တိုတိုနဲ့ တောင်မလေးတွေ ရိုက်ခိုင်းရင် …
အောက်ကို ကြည့်ပါ့မယ် …
ဟို … အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံးလေးပိုင်ရှင်က ဂယ်ချောတယ်ဂျာ …
ရွာထဲက မိဗြဲတို့၊ မိစိန်ပေါက် (မိဗိုက်)၊ မိကြီးမိုက် တို့နဲ့များ မိုးနဲ့မြေ ပဲ …
တခါက အရူးအမူး ၀ါသနာပါခဲ.ဘူးတယ် ညီလေးရေ …
ဓတ်ပုံဆိုရင်အမြဲဝင်ကြည်.ပါတယ် ၊ သိပ်တော.မမန်.ဖြစ်ဘူး ….
ပါသေးတယ်။ငယ်ငယ်ကအကြောင်းလေးတွေပြန်သတိယတယ်ကွ ၊K 1000 ကို ၁၂၀၀၀ ဆိုတော.
မ၀ယ်နိုင်လို. လွမ်းခဲ.ဘူးသေးတယ် ……။
ဦး ဆာမိ .. အားတဲ့တစ်ရက် တွေ့ကြတာ ပေါ့ဗျာ နော့ .. ခုလိုက် ရိုက်လဲ ရတာပဲဟာ …
ကွန်ပစ်တဲ့ပုံဆိုတာ မမြင်ရတော့ဘူး။ သူကြီးဝယ်လိုက်လို့လားဟင်။
သံသရာခရီးသည်ပုံက ထရိုင်ပေါ့နဲ့ရိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ကျောပေးထားတော့ ရီမုတ်နဲ့ရိုက်တာလား။
တီတီက EOS ကြီးကို မျောက်အုန်းသီးရသလို ဘယ်နားဘာနှိပ်ရမှန်းတောင် မသိသေးဘူး။
ပန်းတနော်သွားတဲ့ ခရီးကျရင် လုလင်ကို သင်ခိုင်းကြမယ် စိတ်ကူးနေတာ။
လုလင် ပုံတွေ တင်ရင် အပါချာတွေ စပိတွေပါ ထဲ့ရေးပေးပါလား။
ကွန်ပစ်တဲ့ ပုံ ကပေါ်ပါတယ် အရီး ရဲ့။ သံသရာခရီးသည် က ဒီအတိုင်း ပဲ Timer နဲ့ ရိုက်တာပါ။ နောက်ခါကျ ရင် အဲလို လေးတွေ ထည့်တင် ပါ့မယ် တီတီ ရေ။ EOS ကြီး က ဘယ်လောက် D လဲ သိပါရစေ တီတီ ရေ။
ကိုလုလင်ရေ တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ…. သမီးဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရင် တစ်ခါတစ်လေကျရင် အဆင်ပြေတယ် တစ်ခါ တစ်လေကျရင် တစ်အားရုပ်ဆိုးတယ် သမီးလို ရုပ်ဆိုးတဲ့လူရဲ့ ရုပ်ရည်မျိုးကို အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လို ရူထောင့်ကရိုက်သင့်ပါသလဲ သမီးကရော ဘယ်လိုမျက်နှာအနေအထားမျိုးကိုထားသင့်ပါသလဲ …..
ဒီလို ပညာရပ်မျိုး …. ဆြာ အင်ဇာဂီ သာ တတ်ကျွမ်းပါကြောင်း ….. ကျွန်တော် က ရှုခင်း လေး၊ ဘာလေး သာ ရိုက်တတ်ပါကြောင်း
နှစ်ခါ လောက် တွေ့ဖူးတာကြာင့် နဲ့ gtalk မှာ ဒါ့ပုံတင်ထား တာကြောင့် သေချာ ကြည့်ကြည့်တော့ .. ဘယ်နားက ရုပ်ဆိုးပါလိမ့်။ .. ဘယ်နားရုပ်ဆိုး တယ် ပြောပါလိမ့်ကွယ်။
သက်ြန်ကျရင် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းလိုက်မယ် …
မန်းလေးက ဒီးဒုတ်ဆီတောင် ရောက်ဖြစ်မလားမသိဘူး ….
ကျွန်တော် မနက်ဖြန် မန်းလေးသွားဖြစ်တယ် တီတီ ဝေ ရေ့  …။ ဒီးဒုတ် တော့ အခြေအနေ အရ ပဲ .. ရောက်ဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားမယ်။